OEM Rewoda युएसबी-सी हब पीडी कारखाना र आपूर्तिकर्ता संग | Rewoda
इमेल समर्थन marketing@rewoda.com
समर्थन कल + 86-755-33525517
युएसबी पर्खाल चार्जर
युएसबी द्रुत चार्जर
स्मार्ट हार्डवेयर लागि
घरेलू उपकरण लागि
बाहिरी बिजुली आपूर्ति
पेय पावर स्टेशन
युएसबी 3.0 केबल
Rewoda बहु-समारोह डकिंग स्टेशन61 मा
Rewoda प्रकार-सी हब
मिनी प्रदर्शन महिला पोर्ट Rewoda युएसबी-सी
गर्न HDMI Rewoda प्रकार ग केबल TYPE-सी
Rewoda हब डकिंग स्टेशन 11 1 मा
Rewoda युएसबी-सी पीडी संग हब
Rewoda युएसबी सी हब 8-मा-1
1 हब मा Rewoda युएसबी सी HDMI एडप्टर 7
7 HDMI एडप्टर 1 प्रकार ग मा
युएसबी-सी शक्ति वितरण संग हब
USB3.0 * 1 Rewoda युएसबी सी हब, HDMI:4हजार @ 30Hz, वीजीए, ओडी ...
मैकबुक लागि USB-सी हब
Rewoda प्रकार सी हब
Rewoda युएसबी 3.0 हब बहु-समारोह डकिंग स्टेशन
Rewoda 8 1 यूएसबी-सी हब मा
Rewoda युएसबी-सी हब51 मा
सी हब प्रकार
युएसबी संस्करण संग तलतिर मिल्दो: 3.0
ग पोर्ट प्रकार: PD3.0
यो USB-सी हब अर्डर आफ्नो उपकरण मेल मा एक मा बहु-समारोह इन्टरफेस छ। र बहु-पोर्ट युएसबी चार्जर्स मैकबुक पोर्ट जडान प्रतिबन्ध को समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। साथै, यो बहु-पोर्ट युएसबी चार्जर्स पनि नोटबुक कम्प्यूटर लागि बलियो शक्ति प्रदान गर्न प्रयोग को बाह्य विस्तार पूरा गर्न सक्छन्। यसलाई यो USB-सी हब समर्थन तातो-swappable, प्लग र प्ले, प्रयोग गर्न सजिलो नै time.And मा धेरै यन्त्रहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ र निःशुल्क चालक Windows XP / Vista / 7/8 र म्याक ओएस, Linux को लागि समर्थन गर्दछ। र यो पूर्ण-गति (5GMbps) USB उपकरण प्रोफाइल समर्थन गर्दछ। यसलाई टाइप सी इन्टरफेस र माउस, कार्ड रिडर, आदि संग म्याकको लागि उपयुक्त छ। नोटबुक जडान थप सुविधाजनक। भिडियो, कार्यालय बैठक थप सुविधाजनक। सानो पर्दामा सेकेन्ड ठूलो स्क्रीन हुन्छन्। HDMI अडियो र भिडियो लयात्मक आउटपुट, साझेदारी धन्य समय।
बहुराष्ट्रिय प्लग उपलब्ध
यो USB-सी हब बौद्धिक उत्पादन भोल्टेज समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो कुनै पनि देशको लागि उपयुक्त छ। र साँच्चै सजिलो पोर्टेबल स्टेशन यस्तो शक्तिशाली चार्ज क्षमता संग बोक्नु। तसर्थ, यो USB-सी हब, सबै भन्दा राम्रो विकल्प मान्छे को लागि धेरै उपयोगी जब बाहिरी वा घर छ।
इन्टरफेस प्रकार:3एक्स USB3.0, पीडी, एसडी र TF पोर्ट, HDMI + RJ45
HDMI पोर्ट: 3840 * 2160 * 30HZ
टाइप ग पोर्ट: PD3.0
थप पोर्ट, थप सुविधा
एसडी / TF कार्ड स्लट
पीई defult मा झोला
* आम उत्पादन एक पीई बैग मा पैक हुनेछ।
* ग्राहक आफ्नो आफ्नै प्याकेज डिजाइन कलाकृति प्रदान गर्न सक्छ र हामी आफ्नो डिजाइन अनुसार उत्पादन व्यवस्था गर्न मदत गर्न सक्छ।
Rewoda तटस्थ खुद्रा प्याकेज
* हामी मानक खुद्रा प्याकेज डिजाइन प्रदान गर्न, ग्राहक हाम्रो diecut आधारित पुन: डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ।
नमूना उपलब्धता र नीति
हामी आफ्नो सन्दर्भको लागि ग्राहकहरु 'आवश्यकता रूपमा अनुसार नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, नमूनाहरू जनसंचार आदेश को कुल लागत देखि कटौती गरिनेछ शुल्क, को माल ग्राहकहरु द्वारा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
ग्यारेन्टी / आश्वासन / नियम र सर्तहरू
हामी हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर ग्यारेन्टी। हामी शीर्ष गुणवत्ता उत्पादनहरु र एउटै क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य संग हाम्रो ग्राहकहरु सबै प्रदान गर्नेछ।
निर्यात / आयात प्रशोधन समर्थन
हामी ढुवानी भन्सार लागि राम्रो सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् निर्यात कागजात, र गुणस्तर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रदान गर्दछ।
हामी हाम्रो सेवा सुधार गर्न वितरण पछि ग्राहकको प्रतिक्रिया र सुझाव मा फलो: हामी हाम्रो customers.Such लागि सबै भन्दा राम्रो पछि-बिक्री सेवा प्रदान गर्नुहोस्। हामी हाम्रो ग्राहकको बिक्री conditions.Our बिक्री प्रतिनिधि ग्राहकहरु संग सम्पर्कमा रहन र कुनै पनि समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ अनुसन्धान गर्नुहोस्।
तपाईँको फोन क्षतिग्रस्त हुनेछ यसलाई पूर्ण जब तपाईं चार्जर अनप्लग छैन भने हुनेछ?
आधुनिक मोबाइल फोन को शक्ति व्यवस्थापन सिद्ध छ। मोबाइल फोन पूर्ण भएपछि, चार्जर प्रकाश लोड सञ्चालन छ, र उत्पादन वर्तमान धेरै सानो छ। ब्याट्रि मूलतः भरिएको छ, किनभने प्रवाह गर्न सक्ने वर्तमान धेरै सानो छ। यस समयमा, चिप स्वतः चार्ज र छुट्टी मोडमा ब्याट्री परिवर्तन रोक्छ। पनि सँगै काम गर्न बाह्य चार्जर प्रयोग गर्नुहोस्। किनभने यो प्रक्रिया नियन्त्रणमा धेरै सुरक्षा संयन्त्र छन् सिद्धान्त मा, त्यहाँ फोन गर्न कुनै हानि छ। तथापि, विचार चार्जर जडान पछि, प्रणाली जटिल हुन्छ, र समस्या को सम्भावना साँच्चै उच्च हुनेछ, त्यसैले यो खींच वा भरिएको छ, यो निर्णय सम्म तपाईं छ। सुरक्षा, उपेक्षित अवस्थामा विचार, यो हाल चलान गर्न राम्रो छ।
मोबाइल फोन चार्जर ताइवान मा सिधै प्रयोग गर्न सकिएन?
चार्जर मा भोल्टेज आधारमा, भोल्टेज सामान्यतया चार्जर को सतह मा छापिएको छ:
तपाईंले यसमा 100 ~ 220V छाप्न भने, तपाईं ताइवान मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं मात्र 220V छाप्न भने, त्यसपछि तपाईं रूपान्तरण सकेट ल्याउन आवश्यक छ।
मोबाइल फोन चार्जर फ्रिक्वेन्सी के हो?
फ्रिक्वेन्सी विभिन्न देशहरूको भोल्टेज अनुसार फरक हुन्छ।
चीनको एकल-चरण विद्युत आवृत्ति हो 50hz छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार, वैश्विक एकल-चरण बिजुली मूलतः 50 हर्ट्ज र 60 हर्ट्ज को मात्र दुई आवृत्तियों छ, र voltages 100, 110, 120, 127, 220, 230, र 240 देखि लिएर, भिन्न छन्।
के पछि-बिक्री सेवा?
हामी 12 महिना ग्यारेन्टी प्रस्ताव।
कृपया हामीलाई सम्पर्क स्वतन्त्र महसुस!
अघिल्लो: Rewoda युएसबी सी हब 8-मा-1
अर्को: Rewoda हब डकिंग स्टेशन 11 1 मा
4 मा 1 Usb-सी हब
8 मा 1 यूएसबी-सी हब
हब डकिंग स्टेशन
Thunderbolt3युएसबी-सी हब
युएसबी 3.0 केन्द्रों
USB 3.1 उत्प2हब
युएसबी सी हब 8-मा-1
USB हब 3.0
युएसबी-सी मैकबुक लागि हब
युएसबी-सी हब संग पीडी
पावर वितरण संग युएसबी-सी हब
युएसबी-सी बहु-पोर्ट हब
12W चार्जर्स लागि फोन पर्खाल चार्जर
Rewoda 12V एडप्टर
Rewoda युएसबी सी र मैकबुक / प्रो, डेल लागि USB एक ...
30W युएसबी-सी PD3.0 चार्जर सेल लागि द्रुत चार्ज ...
प्रकार-सी केबल, क्यूई वायरलेस चार्जर, युएसबी सी हब 8-मा-1, USB-सी केबल, वायरलेस चार्जर, प्रकार-सी हब,